Mmetụta nke Akara na Mkpebi Purzụ Azu Ahịa | Martech Zone
Anyị na-ede ma na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara njirimara na mkpebi ịzụta dịka ọ metụtara mmepụta ọdịnaya. Recognitionghọta akara na-arụ ọrụ dị mkpa; ikekwe karia ka ị chere! Ka ị na-aga n'ihu na-eme ka ị mara aha gị na weebụ, buru n'uche na - ọ bụ ezie na ọdịnaya ahụ nwere ike ọ gaghị eduga ozugbo na ntugharị - ọ nwere ike iduga nrịba ama. Dika ọnụnọ gị na abawanye na akara gị ga - abụ akụ a tụkwasịrị obi, na - eme ka atụmanya gaa na ntụgharị ga - adị mfe karịa oge.
Heidi Cohen nwere nnukwu edemede ebe ọ na-ekerịta 30 nkọwa dị iche iche nke ihe a ika bu. Nkọwa m dị ntakịrị nke ọtụtụ echiche.
Akara bụ njirimara nke ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ gị nwere oge. Ọ na-agụnye akụkụ abụọ a na-ahụ anya na nke a na-ezisa dị ka ụlọ ọrụ ahụ kọwara, yana ihe amatapụtara site n'aka ndị ọzọ na-abụghị ụlọ ọrụ ahụ. Akụkụ ndị a na-ahụ anya gụnyere akara ngosi, eserese, agba, ụda, na vidiyo. Akụkụ ndị a metụtara gụnyere mmetụta, ọdịbendị, ụdị mmadụ, ahụmịhe, na akọ na uche nke ụlọ ọrụ ahụ na ndị nọ n'ime ya.
Nke a bụ ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị mkpa banyere mmetụta nke ika na mkpebi ndị ahịa ịzụta:
Advocacy - 38% nke ndị mmadụ kwadoro akara ha dị ka or -eso na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Brand - 21% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha na-azụta ngwaahịa ọhụrụ n'ihi na ọ sitere na akara ha masịrị ha.
Mgbanwe - 38% nke ndị nne nwere ike ịzụta ngwaahịa sitere na ụdị nke ụmụ nwanyị ndị ọzọ Dị ka na Facebook.
email Marketing - 64% nke ndị zaghachirinụ ga-emeghe email ma ọ bụrụ na ha atụkwasị obi na ika ahụ.
search - 16% abawanye na ika cheta mgbe a akara a ma ama pụtara na nsonaazụ ọchụchọ.
Social Media - 77% nke mkparịta ụka mkparịta ụka na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ndị mmadụ na-achọ ndụmọdụ, ozi, ma ọ bụ enyemaka.
Okwu Ọnụ - ụdị nke na-akpali ike mmụọ dị elu na-enweta 3 ugboro ahịa okwu ọnụ.
Site n'inwe oke ibu na mkpebi ịzụrụ, isi ihe dị mkpa maka nzukọ ọ bụla bụ na nghọta ụlọ ọrụ gị nwere mmetụta dị egwu. Nke ahụ pụtara na ọbụlagodi usoro azụmaahịa kachasị emetụta nke etinyere n'ofe niile ga-emebi ọrụ ndị ahịa dị egwu ma ọ bụ ihe omume na-emebi echiche nke nzukọ ahụ.
Tags: Attributionbrandika akwadoakara na emailika ahiaahia ahiaika mgbasa oziika okwu ọnụmbọnmkpebi ndị ahịa ịzụ ahịamkpebi ịzụtaokwu onu
Sep 29, 2015 na 4: 16 AM
Nke a bụ ezigbo echiche banyere etu ọdịnaya si arụ ọrụ dị ukwuu na itinye akara. Mmadu aghaghi ihu na mgbe ha na eme ahia ahia obughi nani banyere igbanwe ndi nleta na ndi ahia. O nwekwara ike na-ewulite njirimara ha ma gbanwee ndị ọbịa a ka ha bụrụ ndị na-akwado nkwado. Otu ụzọ isi mee nke a bụ ijide n'aka na ị tụọ arụmọrụ na iru nke mkpọsa gị yana otu ndị mmadụ si azaghachi ọdịnaya ha n'ụzọ dị iche iche ma ọ bụ ebe a ka ahịa dashboard dị ka Tapanalytics si abịa.
Sep 30, 2015 na 1: 20 AM
Daalụ maka ịkekọrịta isiokwu ahụ. Mbọn na njirimara nke ngwaahịa bụ ihe dị mkpa mgbe ọ bịara ịzụ ahịa. A ika aha na-emetụta ndị mmadụ mgbe niile na Ee, ọdịnaya na-arụ ọrụ dị mkpa.